Amaqembu akuleli akwamukele ukwesula kukaMugabe | News24
Amaqembu akuleli akwamukele ukwesula kukaMugabe
Cape Town – Amaqembu aphikisayo eNingizimu Afrika ngoLwesibili ebusuku azwakalise ukuthi ayakwamukela ukwesula kukaRobert Mugabe njengomengameli waseZimbabwe.
Umholi weDemocratic Alliance uMmusi Maimane uthe yize lokhu kusho ukunqoba kwabantu baseZimbabwe, kepha uyakhala ngokuthi iZanu-PF yiyo esaqhoqhobele uMbuso.
"Indaba kaMugabe ayihlukile neze, yinto eyejwayelekile ezwenikazi lethu. Umuntu owakhulula abantu, nguye owaphinde wadala uqhekeko, ukuntenga komnotho kanye nokunye okuningi. Wasuka ekubeni ngumkhululi waba ngundlovukayiphikiswa,” kusho uMaimane esitatimendeni.
"Yize ukwesula kukaMugabe kuyigxathu lokuqala elibheke esiqalweni esisha kubantu baseZimbabwe nokho ngeke kusize ngalutho ekulungiseni izwe. Kungenzeka ukuthi uMugabe usehambile, kepha iZanu-PF isasele.”
OLUNYE UDABA: UMugabe ugcine ehlile esikhundleni
"Njengawo wonke amaqembu akhulula abantu e-Afrika, iZanu-PF isithathwa njengenhlangano ehaqwe yizimpi zangaphakathi ngenxa yokubangwa kwezikhundla kanye nezinsiza zikahulumeni.”
UMaimane uthe bekucacile kulezi zinsuku ezedlule “ebezishubile” ukuthi uMugabe akazange aziphumele esikhundleni kepha uphoqiwe.
I-Economic Freedom Fighters (EFF) inxuse abantu ukuba basamukele isivumelwano esibe phakathi kukaMugabe neZanu-PF, esiholele ekutheni agcine eshenxile.
Umholi weCope uMosiuoa Lekota ukhiphe isitatimende wathi iqembu lakhe “lijabula kanye nabantu baseZimbabwe, ikakhulukazi njengoba kungabanga khona ukuchitheka kwegazi.”